ရေနွေး(boil water) ♦ ဆန်ချိန်ခွက် ၁ခွက်
၂။ ပြီလျှင် ရေနွေးကို နည်းနည်းချင်း ထည့်ပြီ ဆန့်ကိတ် မပေါ့မမာ အနေထားရောက်သည်အထိ သမအောင် လက်ဖြင့် ရောနုယ်ပေးပါ။
Category: ကိုရီယားချက်ပြုတ်နည်း |
ma phoo says:
A Hnin says:
ei khine says:
very intereating for me
can you cook for me!!!
Ei Snow says:
စားချင်နေတာကြာပေါ့ အပြင်မှာဝယ်စားတာက Sausage တွေကို Sauce တွေနဲ့ လုပ်ထားတာ ဆန်မုန့်တောင် မပါဘူးထင်ပါ့ အိ တို့ကလည်း ဆိုင်တိုင်းဝင်စားလို့ မရတော့ ငတ်နေတာလေ.. ကိုယ်တိုင် လုပ်စားအုံးမှာ ကျေးဇူး
ငရုတ်သီးအနှစ်ကို အိမ်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်လို့ အစ်မသိရင်ပြောပြပေးပါလား ငရုတ်သီးမှုန့်က အရောင်တင်မှုန့်ကို ပြောောာား လတ
korea ငရုတ်သီးနှစ်ကို CityMart မှာဝယ်လို့ရတယ်။ ready made က အိမ်လုပ်နဲ့ မတူဘူး ပိုကောင်းလို့ပါ.
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်မ 🙂 B-)
swe swe khaing says:
You r welcome sis 🙂
မ၀တ်ရည် ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာကြည့်ရတာ ဂဏန်းငံပြာရည်စိမ်ဆိုတာ သူတို့တော်တော်စားတာတွေ့ရ တယ်။ လုပ်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးပါလား။
ဟုတ်လား။ တခါမှတော့ မလုပ်စားဖူးဘူး။ လုပ်စားကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။ ပြီရင် ချက်နည်းနဲ့တကွ တင်ပေးပါ့မယ်
ပုံနဲ့တကွဖော်ပြတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးနော် ……..
THank too 🙂
အမဟင်းတွေစု့လို့ စိတ်ဝင်စားလို့လာလည်ပြီးလုပ်စားကြည့်မယ် ကိုရီးယား ဟဲဂျန်းဂူ လုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါလာအမ မတွေ့လို့ကျေားဇူးပြုပြီ အခုလို့အများစားချင်တာတွေ လုပ်စားလို့ရအောင် ပင်ပန်းခံတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
မမဝတ်ရည်ရေ ဆန်မုန့်က ကောက်ညင်းဆန်မုန့်လား ရိုးရိုးဆန်မုန့်လားသိချင်လို့ပါ
moonက တော့ပူကီအရမ်းကြိုက်တာ အပြင်မှာဝယ်စားရင်ဈေးကြီးပြီးနည်းနည်း
ရိုရိုးဆန်မှုန့်နဲ့ လုပ်ရတာပါ။ ကျေးဇူးပါ
မမဝတ်ရည်ရေ ငါးခြောက်ကတစ်ခြားငါးခြောက်ဆိုရင်ကောရပါသလား။ပဲခူးကဆိုင်တွေမှာတော့ ငရုတ်သီးအနှစ်က ကိုရီးယားငရုတ်သီးနှစ်မရှိလို့ chilli pasteပဲတွေ့လို့ အဲဒါနဲ့ကောသုံးလို့ရပါသလား မမ။နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့။
ငါးခြောက်မဟုတ်ဘူး sis .. ငါးသေးခြောက်လေးတွေ ထည့်ရမှာ။ ငရုတ်းသီးနှစ်က ရိုးရိုး ငရုတ်သီးအနှစ်ထက် ကိုရီယား ငရုတ်သီးအနှစ် ပိုချိုတာမို့၊ ရိုးရိုး ငရုတ်သီးသုံးရင် သကြားပါ ထည့်ပေးပါ.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ရပါစေ..
nang aye says:
May Hsu Mon says:
ခုမှ comment ရေးဖြစ်တာပါ
နောက်လ ည်း နိုင်ငံတကာဟင်းချက်နည်း
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးမယ်နော် sis.. thanks 😀
Marilyn Latt says:
အစ်မရေ ပေါင်းအိုးနဲ့ ဆန်ကိတ်ကို ထည့်ပေါင်းတော့ ရေထည့်ရပါသလား? ရေ ဘယ်လောက် အတိုင်းအဆထည့်ရလဲ သိချင်လို့ပါ။
TV အစီအစဉ်မှာလဲ အားပေးနေပါတယ်
Sheng kham says:
မမ ငရုပ်​သီးအနှစ်​ကို အလွယ်​တကူမရနိုင်​ရင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ?